NONGSHIM - Cup Chapa Guri 114G
Freshness Guarantee: N/A
Product Name: NONGSHIM - Cup Chapa Guri 114G
Description: NONGSHIM အမှတ်တံဆိပ် ချာပါဂူရီ ပုံမှန်အရသာ ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲခြောက်။
Ingredients: Noodles: Refined Wheat Flour, Palm Oil, Potato Starch, Salt, Mineral Salts, Sweetener, Green Tea Extract.
Soup Base: Seasoning(Maltodextrin, Salt, Yeast Extract, Hydrolyzed Vegetable, Coconut Oil, Soy Sauce, Artificial Egg Flavour, Soybean Oil), Salt, Spices, Red Pepper(INS621, INS627, INS631), Sugar, Anti-Caking Agent(INS551).
Seasoning Oil, Seasoning(Mustard Oil-Low Euric Acid), Seasoning Oil(Rice Bran Oil, Natural Onion Flavour, Corn Oil, Green Onion, Sesame Seed Oil), Spices(Chili).
Flakes: Textured Vegetable Protein 32.26%(Soyben, Wheat Gluten, Soy Protein, Soy Sauce(Soy, Wheat), Flavour Enhancer(INS627, INS631)), Dried Fish Cake 25.81%(Pollack, Starches(Corn, Potato)), Dried Kelp(16.13%), Dried Carrot(12.90%), Dried Sea Mustard Seaweed(12.90%).
Serving Size Average Nutritional Value As Per (100g)
Allergy Information: ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်သူများ စားသုံးရန်မသင့်ပါ။
How to use: အဖုံးအားတစ်ဝက်ဖွင့်ပါ။ ရေနွေးထည့်ပါ။ အဖုံးကိုပြန်ပိတ်ပြီး ၄မိနစ်စောင့်ပါ။ အဖုံးမှ အပေါက်ငယ်လေးများမှ တစ်ဆင့်ရေကို ဂရုစိုက်ပြီးစစ်ပြီး ရေ၅ဇွန်း ၆ဇွန်း စာခန့်ချန်ထားပါ။ အရသာမှုန့်ထုတ်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီကိုထည့်ကာ သမအောင်မွှေပြီးနောက် အရသာရှိစွာစားသုံးနိုင်ပါသည်။
Storage Condition: အေးမြ၍ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်ထားပါ။
You're reviewing:NONGSHIM - Cup Chapa Guri 114G